Indlela yokuphucula iqela leProjekthi Ukuphumelela ngokusebenzisa i-Skills Manager Skills - ITS
Zakhono zoMphathi weProjekthi:Isihloko sendlela umlawuli womsebenzi (PM) esebenzayo kwisakhiwo esinobuchule okanye esitelekeni esenza umsebenzi osebenzayo ufumana ootitshala kunye nabo ukuba bayenze babuzwa ngokumalunga neklasi yolawulo lokusebenza endiyalileyo.
Uninzi lwemisebenzi 'yangaphakathi imisebenzi isebenza kwintlobo ethile yendlela yokusebenzisa i-utilitarian, inobuthakathaka obunobutyebi okanye isakhiwo sohlengahlengiso sesigxina. Oku kuthetha ukukhulisa oogxa beempendulo kumlawuli onobulumko olawula izabelo zabo, iimviwo zokuphumeza, ukuphakamisa, ukuvuza, njalonjalo. Kwada kweli nqanaba, PMayinxalenye elincinci kule nkqubo.
Isiluleko sam sokuqala PMabaphelela kule meko kukuphonononga ukuba yi-Project Management Institute (PMI) kufuneka iphendule ngokubhekiselele kwingcali ye-PM. Oku kungafumaneka kumaphepha e-283 kunye ne-284 kwisikhokelo ku- IQumrhu loLawulo lweProjekthi (I-PMBOK® Guide)- Udidi lwesihlanu. I PMBOK® Isikhokelo sikhuthaza ukuba ii-PM zisebenzise umxube wezodwa, ezizimeleyo kunye nezixhobo zokuxhamla ukusebenzisana ngokufanelekileyo kunye nokujongana nokwandisa oogxa. PMI Ucebisa ii-PMs ukuba zenze izibonelelo ezintathu okanye iindawo zokuphumelela:
I-3 I-Skills Manager Skills ukuphucula iqela leProjekthi
1. Yiba nguvulindlela
3. Yiba yintloko
Impembelelo yentlalo - Ii-PMs zinokuchaphazela ukwandisa iimvakalelo zabalingane, izigqibo kunye nokuziphatha. Ii-PMs zingasebenzisa impembelelo yoluntu kwiinkalo ezininzi zokujonga, umzekelo, inkululeko, inzululwazi, ubunzima beentanga, ukunyaniseka kunye nempembelelo kwintsebenzo yokwandisa ootitshala kunye nokwenza.
Yakha iphupha - PMs kufuneka abe namandla okubona iimveliso zokugqibela. Ii-PMs azikwazi ukubonelela ngesikhokelo sokuhamba ngaphandle kokungazi injongo ethile.
Beka ikhosi - Ii-PM ziyakwazi ukubonisa ngokucacileyo kwaye ngokucacileyo apho iqela liya khona kwaye linike isalathiso kwindlela efanelekileyo yokufikelela.
Vuka - Ii-PM zifuna ukufumana izinto. Abasebenzi abathandanayo banokuthatha izakhiwo ezimbalwa, umzekelo, ukwenza abantu bafune ukwenza izinto, bazalise abantu abanomnqweno wokwenza izinto nokunikela iingcamango malunga nokufezekisa into ethile.
Mentor / khuthaza - Ii-PM ziyakwazi ukucebisa nokuvuselela abanye. Baya kunika uqeqesho okanye ukuqhubela phambili kubasebenzi ngokusebenzisana nabo ekufezekiseni iinjongo zokuqhuba rhoqo. Bayakwazi ukwabelana ngeentlanganiso, banikeze isikhuthazo, banikeze ulwalathiso baze babelane ngekhono labo.
Uncedo kwaye ukhuthaze abanye - I-PMs kufuneka inike uncedo kunye nenkxaso ekusebenzisaneni nabo ekusebenzeni kwabo ukufezekisa iinjongo zokuqhuba rhoqo. Oku kuthumela umyalezo othi uphumelelo lweziphumo ezabelwanayo kufuneka ube yingcali ngokubambisana. I-PMs bolster yandisa oogxa, kwaye ngokukhawuleza, kwandisa abo basebenzisana nabo.
Ukufezekisa iinjongo ezabelwana ngazo - Ii-PM zibeka iinjongo ezibonakalayo kwaye zineemveliso ezigqibeleleyo zokugqibela. Iinjongo zinokungenani ubunenjongo enye ekufuneka ifezwe ngaphakathi kwexesha elihle. Oku kunika abazalwana kunye nomvakalelo wokuba nenendawo.
Ukulawula nokuququzelela abanye - Ii-PM zikhokela iqela ngokunika izikhokelo, iqhinga kunye nokukhuthaza. Ii-PM zivela kwaye zicacise oko, nini, phi, kwaye njani.
Yiba nengqiqo - Ii-PM ziyakwazi ukukholisa. Le nkqubo isetyenziselwa ukutshintsha imeko yengqondo kwixesha elithile ngokusebenzisa iqulunqo okanye ukuthetha kunye kwaye kufuneka kube lula ukudlula idatha, imivo, ukucinga okanye ukudibanisa kwezi zinto.
Ukucaca ngokucacileyo ukugxininisa / izikhundla - Ii-PM kufuneka zivakalise iingcamango ngokucacileyo, ngokucacileyo kwaye zisetyenziswe ngokucacileyo.
Sebenzisa ingqalelo engekho PMs kufuneka agxininise ngokupheleleyo kwizinto ezitshiwoyo ngokuchasene nokuthi "ukuphulaphula" umyalezo wesithethi. Ngokuqwalasela, i-PM iya kufumana ukubaluleka kwenene kwengxoxo. Oku kungasetyenziselwa ukubonisa intlonipho kwisithethi, esiza kunceda ekukhuliseni ubudlelwane obukhulu kunye nabo basebenzisana nabo.
Ukuqwalaselwa / Ukuqwalaselwa kwezikhundla ezahlukeneyo - PMs kufuneka bazikhumbule kwaye banike ingcamango efanelekileyo ukugxininiswa ngabanye abasebenza nabo. Ngokwenza njalo, i-PM ikhulisa isinamathiselo yeqela ngokuthumela umyalezo ukuba ubhekisela kwizigqibo kunye nabafundi.
Idilesi nje imiba ebalulekileyo I-PMs kufuneka isebenzise amandla abo okuqonda ukungafani phakathi kwemiba ebalulekileyo esuka ekungabalulekanga okanye ngokukrakra. Kwinqanaba xa iqela lequmrhu libona lo mandla, lwakhiwa kwaye liqwalasela i-PM.
Ukufumana iziphakamiso - I-PM iya kuthethana nabo bonke abantu kuquka nabalingane. Ii-PMs kufuneka zisebenzise amandla abo ukufezekisa zivumelane nabantu ngabanye ukusuka kwimiba ethile yokujonga ukusekela kwisiseko ekuqondeni.
Fumana izi nqanaba ezisibhozo ukuzinza kwiindawo zakho ezikhethiweyo:
Ukwahlula kwaye ucacise umba.
Qinisekisa indlela yombambano uze uyiqhekeke kwiinqununu.
Cwangcisa imibuzo, qokelela idatha kwaye uyiguqule ibe yidatha.
Myalelo / ubhale / uqokelele / uqhagamshelane ne-abridge uze uyisebenzise ngempumelelo.
Ukuqonda kunye nokusebenzisa intuition engqambileyo ukugqiba indlela efanelekileyo yokujonga ingxaki njengoko ixesha kunye nexabiso elingekho mfuneko.
Khetha ukuba iinkcukacha ezongezelelweyo ziza kunceda njani ilungiselelo.
Cinga inxalenye enkulu yokukhetha; ukhethe lowo ophantse uququzelele ilungiselelo eligqibeleleyo.
Ukufeza ukhetho; Gcina iliso malunga nendlela ilungiselelo elikhethiweyo elilungisa ngayo umba.
Ukusebenzisa umxube wolawulo, impembelelo kunye nobuchule bobunkokheli obuphambili buya kuphucula amathuba okuba ngumlawuli wephulo lokuphumelela kweqela. Ngelo xesha xa oogxa bebona umphathi wesigqeba esebenzisa yonke into echazwe, ebonakalisiweyo nangendlela eqondekileyo, ukujonga kunye nokuthengwa kuyo loo nxalenye kunye nokukhula kuyo kwandisa.
I-7 Amanyathelo okusebenzisa i-IT Skills Frameworks